Xoortay | February 2020
Sida loo faafiyo ash buur (aronium) madow
Ugu Weyn Ee Xoortay
Guryaha dawooyinka iyo waxyeelada qofka weyn
Elderberry waa dhaqan caan ah oo ku yaal dhulkeena. Waxaa loo isticmaalaa tan iyo wakhtiyadii hore ma aha oo kaliya sida dhirta ornamental, laakiin sidoo kale sida daawo ee dad iyo daawo dhaqameed. Run, waxay u baahanyihiin inay taxaddaraan. Sidaa darteed, in this wax aan ka hadli doonaa ku saabsan sifooyinka of elderberry, iyo sidoo kale fiiro gaar ah u leh bogsashada bogsashada iyo contraindications suurto gal ah.
Qodobada suugaanta ee blueberries
Blueberries waxaa badanaa lagu wareersan yahay blueberries, laakiin blueberries waa warshad aad u kala duwan. Isla mar ahaantaana, sifooyinka wanaagsan ee blueberries ayaa dhowr jeer ka sarreeya miraha kale, sidaas awgeed waxaan ka wada hadli doonnaa hoosta ay ka kooban tahay iyo isticmaalka. Waxyaabaha kiimikada ah iyo qiimaha nafaqada ee blueberries Marka lagu daro kiimikaadkooda, blueberries ayaa badanaa ka helaa richer ka badan currants madow, ma aha in la xuso blueberries kale.
Chokeberry (aronia) waa geed jeexan ama geed oo qoyaan leh. Waxaa lagu beeray sidii daawo, cunto iyo warshad ornamental. Waqooyiga Ameerika waxaa loo tixgeliyaa meesha uu ku dhashay ee madow. Faafinta chokeberry by gooyn lagu faafiyo by abuur iyo dhirta dhaqameed, hab kasta, rowan hayaa dabeecadaha dhirta hooyada iyo sifooyinka varietal.
Aronia Aronia waxaa loola jeedaa qoysaska geedaha casiirka Pink. Markii hore, warshadani waxay ahayd mid si gaar ah loogu koray ujeedooyin qurxinta, laakiin wakhti ka dib waxaa la ogaaday in midhaha warshadanku ay leeyihiin hanti daweyn oo badan. Sidoo kale chokeberry waa wax aan qabyo ahayn ee daryeelka, taas oo ka dhigaysa dhir beerta fiican, iyo maanta waxaa laga heli karaa beeraha badan.
Qabashada Noocyada Miro-geedka
Khudradda miro baroosku waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee aadka u wanaagsan xagaaga. Geedka dilka ah ee aaggeenna waa mid caan ah waxaana maanta jira qiyaastii hal iyo badh kun oo noocyo ah oo ku xoortay geedihii. Si kastaba ha ahaatee, in this article waxaan jeclaan lahaa in la tixgeliyo noocyada ugu wanaagsan ee miro yar oo la jarjaray.
Qalabka khatarta ah ee faa'iido leh ee geedka dabka
Dabeecadda, waxaa jira dhirro badan oo muddo dheer u adeegsan jiray dadka ujeedooyin caafimaad, laakiin qaar ka mid ah waxay bixiyaan waxtarka keliya, markaad si buuxda ugu badbaado caafimaadka, kuwa kale oo si taxadar leh u isticmaali kara. Waxaan jeclaan lahaa inaan kuu sheego mid ka mid ah wakiilada noocyada ugu dambeeya.
Qalabka waxtarka leh iyo isticmaalka miraha guntimaha
Evergreen baadiyaha juniper muddo dheer ayaa loo yaqaan for sifooyinka bogsashada. Iyo inkasta oo ay berry ah ma aha mid aad u dhadhan fiican, waxay keeni kartaa faa'iidooyin badan. Qeexida iyo sawirka miraha Juniper - warshad ka timaada qoyska xarkaha, iyo magaceeda Celtic oo macnaheedu yahay "rough", "prickly".
Tallaabooyinka cajiibka ah ee Epin: sidee buu orchids u caawin karaa iyo sida loo isticmaalo?
"Shimbiraha cabta goobaha furan ee caasimadda": Magaalada Moscow, shimbiraha waddooyinka ayaa ka soo baxa miro qallalan
Dacwada loogu talagalay digaagga waa wax khafiif ah oo leh fitamiin R yaraanta!
In ka badan 400 sano ka hor, geedka torpedo aabaha waxaa loo keenay Ruushka oo ka yimid Aasiyada Aasiya. Waqtiga gaaban, kala duwanaanshahan, oo hore loo ogaa oo keliya waddamada Aasiya, ayaa ku caan baxay dalal Yurub ah. Waxaa la aqoonsaday oo keliya ma aha oo kaliya dhismooyinka miraha gaaska, laakiin sidoo kale faa'iidooyinkeeda saa'id ah oo ka soo jilcan abuur. Read More
Pecan - guriga lagu beeray
Baradho macaan (baradho macaan): siyaabo faa'iido leh iyo ka hortag
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Xoortay 2020